FBC - Jiraattonni magaalaa Nageellee rakkoon bulchiinsa gaarii akka hiikkamuuf gaafatan
Jiraattonni magaalaa Nageellee rakkoon bulchiinsa gaarii akka hiikkamuuf gaafatan
Finfinnee, Bitootessa 11,2009(FBC) -Jiraattootni godina Gujii magaalaa Nageellee, "Haaroomsa taasifameen jijjiiramni hamma tokko muul'atus, rakkoo bulchiinsa gaarii hiikuu irratti garuu ammas booddeetti harkifannaatu jiraa." jedhan.
Jiraattotni magaalittii Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti akka himanitti abbaa dhimmaa deddeebisuu fi hojjattoonni tokko tokko bakka hojiitti argamuu dhiisuun rakkoo bulchiinsa gaarii ammallee mul'ataa jirudha jedhan.
Harkifannaan ijaarsa daandii keessa keessaa, proojaktii bishaan dhugaatii fi kenniinsi tajaajilaa fooyya’uu qabas jedhan.
Kantiibaan magaalittii obbo Isheetee Taarikuun gama isaanitiin, "Komiin jiraattotni kaasan dhugaadhaa; rakkinicha addaan baasnee furmaata keenyerraafis.” jedhan.
Oduuwwan Biroo « Koorporeeshinichi qajeelfama kiraa manaarratti gatii kaffaltii sirreessuu isa dandeessisu qopheesse	Finfinneetti ji’oottan 2n itti aananitti dargaggoonni kumni 20 hojiitti ni galu »